Ahiahy kolikoly :: Afaka madiodio i Ahmad, filohan’ny CAF • AoRaha
Ahiahy kolikoly Afaka madiodio i Ahmad, filohan’ny CAF
Fahafahana madiodio. Nambaran’ireo akaiky an’i Ahmad, filohan’ny Kaonfederasiona afrikanina taranja baolina kitra, fa: “any amin’ ity filohan’ny Federasiona malagasy teo aloha ity ny pasi­paorony ary hanainga hiala an’i Paris hihazo an’i Bamako izy, anio”, tao amin’ny kaonty Twitter. Hamaha ny olan’ny baolina kitra any Mali, miara­ka amin’ireo ekipan’ny Federasiona iraisam-pirenena (Fifa) izy, araka ny voalaza. Afaka madiodio teo anatrehan’ny Ofisy misahana ny ady amin’ ny kolikoly sy ny halatra ara-bola sy hetra (Oclciff) any Frantsa, ity lehiben’ny baolina kitra afrikanina ity, tamin’ireo vesatra niampangana azy.
Ahiahina kolikoly tamin’ ny fanapahana ny fiaraha-miasa tamin’ny orinasa alemana mpamokatra kojakoja ara-panatanjahantena Puma sy fandraisana ny orinasa frantsay Technical Steel ho mpiara-miasa vaovao, no nakan’ny polisy frantsay azy am-
bavany tao amin’ny trano fandraisam-bahiny niantranoany, tany Paris (Frantsa) ny marainan’ny alakamisy lasa teo. “Tsy misy intsony vesatra mitana azy satria tsy nahita porofo ny mpitandro filaminana frantsay”, hoy hatrany ity loharanom-baovao ity.
Fiparitahana fitaovam-piadiana :: Basy sy bala maromaro sarona tao anaty taksiborosy
Fifandonana mahery vaika :: Lietnà iray naratra voatifitry ny mpandroba banky